सिरहा, ११ वैशाख। प्रथम गोलबजार जिल्ला स्तरीय क्रिकेट प्रतितोगिताका उपाधी एबी–मल गोलबजारले हात पारेको छ । आज सम्पन्न फाइनल खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेका सिरहा टिमले एबी–मल गोलबजारलाई २० ओभरको खेलमा अल आउट भई १ सय २१ रनको लक्ष्य दिएका थिए। ओपनर ब्याटिङका लागि एबी–मलका खेलाडी अनिश मण्डल र किरण मुखिया आएका थिए। खेलको पहिलो ओभरको वलिङ सिराहाका खेलाडी जियाउदिन खानले गरेका थिए। उनी पहिलो ओभरमै २ रण दिएर १ बिकेट लिन सफल भएका थिए। अनिश मण्डलले आफ्नो टिमका लागि २ रण मात्र बनाएर आउट भए। त्यसैगरी, ओपनर किरण मुखिया १६ रन बनाएर आउट भएका थिए। तेस्रो नम्बरमा एबी–मलका खेलाडी निसानत
वीरगञ्ज, ९ बैशाख । जिल्ला फुटबल संघ बाराको अध्यक्षमा रामचन्द्र लामा चयन भएका छन् । बाराको कलैयामा बिहिवार सम्पन्न संघको छैठौ अधिवेशनले लामाको अध्यक्षतामा १८ सदस्यीय जिल्ला समिति चयन गरेको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मातहतको संघको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजकिशोर धामी चयन, उपाध्यक्षमा खुशी चौधरी र घनश्याम चौधरी, महासचिवमा उदय श्रेष्ठ, सचिव विनोद प्रसाद साह र कोषाध्यक्षमा विनोद गुप्तालाई सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । संघको कार्यसमिति सदस्यमा महमद समिउल्लाह, कृष्णमणी चौधरी, दुर्गाबहादुर थापा, शम्भुसिंह ठकुरी, दीपेन्द्र लामा मोक्तान लगायत रहेका छन् । अध्यक्ष लामा र निवर्तमान अध्यक्ष महमद समिउल्ला
सिरहा, ८ वैसाख । प्रथम गोलबजार जिल्ला स्तरिय क्रिकेट प्रतितोगिताको आज भएको पहिलो खेलमा विजयीहात पार्दै धनढिमार्इ नपा टिम सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ । आजको पहिलो खेल एसीसी मिर्चैया र धनगढिमाइ बिच भएको खेलमा धनगढीमाइ १४ ओभरको खेलमा १० विकेट गुमाएर १ सय ३९ रनको लक्ष्य दिएको खेलका आयोजक राजदेबी युबा क्लबका अध्यक्ष सुरजा साहले जानरी दिए । धनगढीमाई टिमबाट अपनर ब्याटिङ गर्न मोहन चौधरी र इर्शाद खान आएको थियो । मोहन चौधरीले २० बलमा २७ रण बनाएर आउट भएको थियो भने, इर्साद खान ५ बलमा सुन्य रण बनाएर आउट भएका खेलका आयोजक साहले बताए। तेस्रो नम्बरमा ब्याटिंग गर्न धनगढीमाइ टिमका खेलाडी ऋषि महतो आएका थिए। उनले
प्रथम गोलबजार जिल्ला स्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता भोलिबाट हुँदै
सिरहा, ७ वैशाख । ‘स्वास्थयको लागि खेलकुद, रास्ट्रको लागि खेलकुद’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरु गराउँदै आएको राजदेबी युबा कल्ब, गोलबजारले ‘प्रथम गोलबजार जिल्ला स्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता’ भोलि बाट सुरु गर्ने भएको छ। जनता नमुना (प्राविधिक) मा. बि. गोलबजारको प्राङ्गणमा राजदेबी युवा कल्ब, गोलबजारको आयोजनामा भोलीबाट प्रतियोगित हुन लागेको हो। ‘प्रथम गोलबजार जिल्ला स्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिता’ मा जिल्लाका ८ वटा टिम सहभागि हुने खेलका सहयोगकर्ता (एबी) मलका सीइओ पिन्टु राउतले जानकारी दिए । खेलमा प्रथम हुने टिमलाई ३० हजार नगद र दोस्रो हुने ट
एन्फा विवादको बाछिटा जिल्ला संघमा, गृहकार्य नपुगेको बारा अध्यक्षको स्पष्टोक्ती
वीरगञ्ज, ४ बैशाख । जिल्ला फुटबल संघ बाराको कार्यसमिति चयनमा विवाद सृजना भएको छ । शनिवार कार्यसमिति चयन गर्न बसेको बैठकले सर्वसहमतिबाट टुंगो लगाउने लगभग पक्कापक्की भइसक्दा पनि अन्तिममा बैठक स्थगित गर्नु परेको जिल्ला फुटबल संघ बाराका अध्यक्ष महमद सैमुल्लाहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘शुरुमा सर्व सहमतिबाट चयन गर्ने तयारी थियो, अन्तिममा केही गृहकार्य पुगेन । अनि समय पनि नभएपछि स्थगित गरेका छौँ ।’ सैमुल्लाहका अनुसार जिल्ला फुटबल संघको बैठक छिटै बोलाएर कार्य समिती सर्व सहमतिमै गरिने योजना छ । यद्यपी संघको अध्यक्षका आकांक्षीहरु कृष्णमोहन चौधरी र रामचन्द्र लामाले अडान नछोडेपछि निर्वाचनमै
वीरगञ्जमा शुक्रवारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता शुरु
वीरगञ्ज, २५ चैत । वीरगञ्जमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता शुरु भएको छ । पर्सा जिल्ला तेक्वान्दो संघद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको मधेश प्रदेशका उर्जा तथा खानेपानी मन्त्री ओमप्रकाश शर्माले उद्घाटन गरेका हुन् । नेपालका सात वटै प्रदेशबाट ७ समूह, नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लब तथा भारत र बंगलादेशका गरी १७ टिमका खेलाडीहरुले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका छन् । पर्सा जिल्ला तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष गणेशमान श्रेष्ठका अनुसार प्रतियोगितामा ४१ केजीदेखि ७४ केजी तौल समुहमा खेलाडीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । प्रतियोगितामा खेलाडी, रेफ्री र प
वीरगञ्जमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुँदै
वीरगञ्ज, २२ चैत । वीरगञ्जमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता हुने भएको छ । पर्सा जिल्ला तेक्वान्दो कार्य समितिले यहि चैत २५ र २६ गते आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगितामा नेपाल सहित भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, देहरादुन, पटना, भुटान र बंगलादेशबाट आएका १७ वटा समूहका खेलाडीहरु सहभागी हुन लागेका हुन् । प्रतियोगिताका संयोजक बीरेन्द्र पटेलका अनुसार ७ वटै प्रदेश, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासँगै भारतका ५ वटा, भुटान र श्रीलंका गरी १७ समूहको सहभागीता रहने छन् । १४ औं साग गेम र इन्डोनेशियामा हुन गइरहेको १९ औं एशियन गेमलाई लक्षित गरेर प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको पटेलले बताए । प्र
प्रथम गोलबजार नगर स्तरिय क्रीकेट प्रतियोगिताको उपाधी वार्ड नम्वर ३ लाई
सुरेश राय सिरहा, १७ चैत । प्रथम गोलबजार नगर स्तरीय क्रिकेट प्रतितोगिताका उपाधी गोलबजार ३ हात पारेको छ । आजको फाइनल खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेका वार्ड नम्वर ३ ले वार्ड नम्वर ८ चोहर्वा लाई १४ ओभरको खेलमा १३ ओभरमा अलआउट भई ८६ रनको लक्ष्य दिएका थिए ।ओपनर ब्याटिङ गर्न वार्ड नं. ३ का खेलाडी नागेन्द्र अधिकारी र रबिन सिंह आएका थिए । खेलको पहिलो ओभरको वलिङ गर्न अभास यादब आएका थिए । उनी पहिलो ओभरको २ बलमै आफ्नो टिमका लागि १ बिकेट लिन सफल भएका थिए । रबिन सिंहले आफ्नो टिमका लागि शून्य रन बनाएर आउट भएका थिए । त्स्तैगरी, ओपनर नागेन्द्र अधिकारी ११ बलमा २५ रन बनाएर आउट भएका थिए । सातौं नम्बरमा वार्ड नम्बर ३
एसियन सिख गेम्समा पदक जित्ने पर्साका खेलाडीलाई सम्मान
वीरगञ्ज, १७ चैत । भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न एसियन सिख गेम्स २०२१ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने पर्सा जिल्लाका १५ खेलाडीलाई सम्मान गरिएको छ । पर्सा जिल्ला तेक्वान्दो संघले स्वर्ण तथा रजक पदका विजेता १५ खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो । सिख गेम्स फेडरेसन अफ ईन्डियाले २९ डिसेम्बरदेखि ३१ डिसेम्बरसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा वीरगञ्जका १५ जनाले स्वर्ण तथा रजक पद जितेका थिए । उनीहरुको प्रोत्साहनका लागि एक समारोहको विच सम्मान गरिएको पर्सा जिल्ला तेक्वान्दो संघका कोषाध्यक्ष रोशन गुप्ताले जानकारी दिए । एसियन सिख गेम्स २०२१ मा पर्सा जिल्लाबाट सहभागी भएकामध्ये ६ जनाले स्वर्ण, ४ जनाले रजत
प्रथम गोलबजार नगर स्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाईनलमा वार्ड नम्वर ३ र ८ भिढ्दै
सिरहा,१७ चैत । प्रथम गोलबजार नगर स्तरिय क्रिकेट प्रतितोगिताको फाईनलमा पहिलो सेमिफ़ाइनल खेलमा वार्ड नम्वर ३ र ८ भिढ्दै छ । हिजो भएको सेमिफाईनल खेलमा विजयीहात पार्दै गोलबजार नपा ३ फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् । पहिलो सेमिफाइनल गोलबजार ब्यपारी र वार्ड नम्वर ३ बिच भएको खेलमा वार्ड न ३ ले १४ ओभरको खेलमा ७ विकेट गुमाएर १ सय ५७ रनको लक्ष्य दिएको खेलका आयोजक दिनेश सहनीले जानकारी दिए ।गोलबजार नपा ३ बाट ओपनर ब्याटिङ गर्न नगेन्द्र सिंह र रबिन मण्डल आएका थिए। उनिहरुले २ ओभरमा जम्मा १३ रन बनाएर आउट भएका थिए ।तेस्रो नम्बरमा नितिश सिंह आएर सुन्य रन बनाएर आउट भएका थिए । भने चौथो नम्बरमा महबुब आलम आएर ९० रन बनाएर